Home | Outboard Boat Motor Mmezi
Nabata na Outboard-Boat-Motor-Repair.com
Ebe a nwere nzube abụọ:
Nke mbụ: Anyị na-eme ka ụgbọ okporo ígwè ụfọdụ na-apụta. Ejiri saịtị a dị ka ihe enyemaka iji nyere ndị ọzọ aka ime otu site na ịdepụta nzọụkwụ ọ bụla n'ụzọ zuru ezu karia ịchọta na ntuziaka ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ụgbọ mpempe akwụkwọ nke dị ka otu n'ime ọrụ anyị, ị ga-enwe ike iji saịtị a iji nyere aka n'ịgba bọmbụ ụgbọ mmiri gị.
Nke abụọ: saịtị a aghọwo akụkụ saịtị ịzụ ahịa. Echiche bụ igosi ndepụta nke akụkụ ndị kwekọrọ na ụgbọala Johnson / Evinrude / OMC / BRP. Ọ bụrụ na ị pịa na listi menu "Ndepụta Mpịakọta" n'elu, ịnwere ike ịchọta moto gị na listi ma hụ ndepụta nke akụkụ maka moto gị na Amazon na eBay njikọ iji nyere gị aka ịchọta akụkụ ị chọrọ ma nweta ezigbo ihe usoro.
A malitere usoro a na 13 afọ gara aga ma nyerela ọtụtụ puku mmadụ aka, site na gburugburu ụwa, wetaghachi ụgbọ mmiri ochie ha. Ka m na-arụ ọrụ na motọ ndị a, otú ahụ ka m na-ahụkwu ha n'anya. Ka saịtị a na-agbanwe, m na-arụ ọrụ na ọrụ ọhụrụ na isiokwu maka obi ụtọ gị. Ebe a dị nnọọ ndụ.
Ebe a abụrụlarịrị ihe gbasara ụwa. Ị nwere ike iji sụgharịrị asụsụ ma họrọ site na asụsụ 120! Mgbe ịpịrị njikọ Amazon ma ọ bụ eBay, a ga-eduzi gị na saịtị kwesịrị ekwesị maka ebe, ego, na asụsụ gị. Ụgbọ ala ụgbọ mmiri yiri ka enweghi oke agbụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ nke asụsụ ma saịtị a dịịrị onye ọ bụla ịnụ ụtọ ya.
Biko nyere aka kwado saịtị a na ọrụ ndị ọzọ n'ọdịnihu site na iji njikọ ụlọ ahịa anyị mgbe ịzụ ahịa maka akụkụ. Ihe ọ bụla ị zụrụ site na ngwá ọrụ ọchụchọ Amazon.com ga-enyere aka na saịtị a. Amazon.com nwere ike ịchekwa gị ego n'ihi na ha na-edekarị otu akụkụ ahụ site na ndị na-ere ahịa. eBay bụ ebe dị mma ịchọta ọnụahịa ego, yana obere akụkụ na-eji eme ihe. Ị ga-ahụkarị nnukwu ọdịiche dị n'etiti onye na-ere ahịa ma ọ bụ ọnụahịa ndepụta, Amazon.com price, na eBay price. Ị nwere ike ịchekwa ọtụtụ ego site na ịpị njikọ anyị. Mgbe ị zụrụ akụkụ site na iji njikọ Amazon ma ọ bụ eBay, anyị na-enweta ihe gbasara 5% ọrụ anyị na-eji iji kwụọ ụgwọ ọrụ na ụgwọ nkwụ ụgwọ metụtara na saịtị a. Enweghị ụgwọ ọzọ ọ bụla ị ga - akwụ mgbe ị na - eji njikọ anyị ịzụta ngwaahịa ma kwado saịtị a.
Anyị na-akpọkwa gị ka ị lee anya na njikọ "Comments" anyị dị n'elu.
GỤKWUO banyere Welcome na Outboard-Boat-Motor-Repair.com
16 nkeji 8 sekọnd ago
6 awa 17 nkeji gara aga
6 awa 25 nkeji gara aga
10 awa 47 nkeji gara aga
10 awa 52 nkeji gara aga
11 awa 10 nkeji gara aga